က Man လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ၏ကျွန်း
က Man လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရား Company ၏ကျွန်း (LLC)
သူတို့ကုမ္ပဏီ၏ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သောကြောင့်က Man လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ၏တစ်ဦးကျွန်းနိုင်ငံခြားသားများနှင့်အတူအလွန်ရေပန်းစားသည်။
1996 ၏လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ (အက်ဥပဒေ) ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း, စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်က Man LLC ၏ကျွန်း၏ရပ်စဲအုပ်ချုပ်။
က Man ၏ကျွန်းတစ်ဦးကဗြိတိန်ကို Crown မှီခိုမှုနှင့်အိုင်းရစ်ပင်လယ်ပြင်ရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။
က Man လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ၏တစ်ဦးကျွန်းကဤအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသွား:
• 100% နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားတွေက Man LLC ၏ကျွန်း၌ရှိသမျှသောရှယ်ယာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်များကသာသူတို့ကလှူဒါန်းခဲ့သည်ရှယ်ယာမြို့တော်၏ပမာဏအထိခံထိုက်ပေဖြစ်ကြသည်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်: non-နေထိုင်သူပိုင်ဆိုင်သည့် LLC ရဲ့အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများပေးဆောင်လူသား၏ကျွန်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာထိတွေ့ဆက်ဆံဘူးသူကို။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်လူတိုင်းနှင့်အတူအမေရိကန်အခွန်ထမ်းသူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• အစာရှောင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း: စံမှတ်ပုံတင်ရေးပိုမြန်မှတ်ပုံတင်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားအဖိုးအခပေးဆောင်ဖို့ option နဲ့အတူ 48 နာရီကြာပါတယ်။
• နှစ်ဦးကိုအဖွဲ့ဝင်များ: (နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်နိုင်သူ) နှစ်ဦးကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးတစ်ဦး LLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးဝေမျှမယ်မြို့တော်: အဘယ်သူမျှမလိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်ရှိပါသည်။
• အင်္ဂလိပ်: က Man ၏ကျွန်းယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပါသည်ကတည်းက အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
LLC သည်က Man ဥပဒေရေးရာ entity တခြားကျွန်းကအသုံးပြုမကုမ္ပဏီအမည်ကိုရွေးချယ်ရမည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏အမည်စကားလုံးများကို "လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်အတိုကောက် "LLC" သို့မဟုတ် "LLC" တစ်ခုခုနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရပေမည်။
တစ်ဦးအဆိုပြုကုမ္ပဏီအမည်ကိုငြင်းပယ်နာမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်မည်သို့အဖြစ်အခြေအနေများဖြစ်စေလျက်, တစ်ဦး LLC က၎င်း၏ကုမ္ပဏီအမည်အားပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်လျက်, LLC လျှင်အမည်အားပြောင်းလဲပါဝါရှိတယ်ရသော Registry ကိုဦးစီးဌာနအနေဖြင့်တစ်ဦးအဆိုပြုကုမ္ပဏီအမည်ကိုရရှိနိုင်၏မတိုင်မီကခွင့်ပြုချက် ဒါကြောင့်ပြောင်းဖို့ဦးစီးဌာနရဲ့အမိန့်ကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်။
အောက်ပါသုံးပစ္စည်းများအသစ်တစ်ခု LLC မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီများ Registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်:
တစ်ဦးကအပြည့်အလျှောက်လွှာပုံစံ (L6) •; နှင့်
ပညတ္တိကျမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ဆောင်းပါးများများအတွက်တိကျသောပုံစံပေးမထားဘူး။ သို့သော်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ 1996 (အက်ဥပဒေ) ဤအချက်အလက်လိုအပ်သည်:
•က Man မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ဖွင့်အမည်နှင့်လိပ်စာ၏ကျွန်း;
•ကြောင့်အဖွဲ့ဝင်များက '' နှုတ်ထွက်စာ, အငြိမ်းစား, သေခြင်း, ဒေဝါလီခံ, ထုတ်ပယ်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ဖျက်သိမ်းဖို့ကုမ္ပဏီအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု,
• LLC သည်မန်နေဂျာရွေးကောက်တင်မြှောက်ပါလိမ့်မယ်လျှင်၎င်း, နှင့်
ယင်းအက်ဥပဒေထဲမှာထွက် set အင်အားကြီးအဖွဲ့ကြီးများ၏ဆောင်းပါးများအတွက်အကြိမ်ကြိမ်ခံရဖို့မလိုအပ်ပါ။
အဖွဲ့များ၏ဆောင်းပါးများအတွက်အမည်ရှိအမည်ရှိနဦးအဖွဲ့ဝင်တို့နှင့်အတူ LLC သည်ဖွဲ့စည်းအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါငျးတို့သဆောင်းပါးများလက်မှတ်ထိုးရမည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီများ Registry ကိုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားဖြစ်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလက်မှတ်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ကြေးလျှောက်ထား LLC သည်အတည်ပြုရှိသည်ဖို့ရှာကြံဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာအပေါ်သို့မှီခို:
• £ 100 အားလုံးလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများလက်ခံရရှိအပေါ်သို့ 48 နာရီအတွင်းဖြစ်ပေါ်စံမှတ်ပုံတင်ရေးများအတွက်
• £ 250 မှတ်ပုံတင်2နာရီအတွင်းပြီးစီးရန်အဘို့အ; နှင့်
• £ 500 လျှောက်ထားသူစောင့်နေစဉ်ပိုမြန်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်
အနည်းဆုံးနှစ်ခုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး LLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည်။ LLC သည်အင်္ဂါမိတ်ဖက်ပူးပေါင်းအုပ်ချုပ်တာနဲ့တူကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်။ အသင်းဝင် assign သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
LLC သည်တိကျတဲ့ပိုင်ရှင်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုယ်စားဖွဲ့စည်းခဲ့လျှင်, အဆုံးစွန်အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်အဖြစ်သူ / သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကုမ္ပဏီများ Registry ကိုရန်လျှို့ဝှက်အခြေခံပေါ်မှာထုတ်ဖော်ထားရပါမည်။
တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကစာရွက်စာတမ်း "Operating သဘောတူညီချက်" ဟုအဆိုပါပြည်တွင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်မည်သို့ LLC သည်ထိန်းချုပ်ထားပါရှိသည်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းပါဝင်ရမည်:
•အကုမ္ပဏီများ Registry ကိုကအတည်ပြုကုမ္ပဏီအမည်,
•မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ရဲ့နာမကိုအမှီနှင့်မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ရဲ့အရည်အချင်းများ 2003 ၏စည်းမျဉ်းများအောက်တွင်အရည်အချင်းပြည့်မီရမည်ဖြစ်သည်သူကိုလိပ်စာ;
အဖွဲ့ဝင် '' မြို့တော်ပံ့ပိုးမှုများကို၏•စုစုပေါင်းငွေပမာဏ;
နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်များဝန်ခံ•အဖွဲ့ဝင်များ '' အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ;
သူတို့ရဲ့မြို့တော်ပံ့ပိုးမှုများကိုမဆိုသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏ LLC ကနေပြန်ဆပ်လက်ခံရရှိရန်•အဖွဲ့ဝင်များ '' အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ; နှင့်
တိုင်း LLC က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏မှတ်ပုံတင်ထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင် LLC သည်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာသို့မဟုတ်က Man ၏ကျွန်းများတွင်မဆိုအခြားတည်နေရာမှာသိုထားရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦး LLC အတွက်ဒါရိုက်တာများအဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
မရှိဒါရိုက်တာများဖြစ်ကြောင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ် LLC သည်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, LLC သည် Operating သဘောတူညီချက်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမန်နေဂျာခန့်အပ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
တိုင်း LLC ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်နှင့်အတူက Man ၏ကျွန်းတစ်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာရှိရမည်။
LLC ရဲ့တစ်ဦးမိတ်ဖက်အဖြစ်အခွန်ကောက်နေကြသည်။ တစ်ဦး LLC က Man နေထိုင်သူများမရှိကျွန်းရှိပြီးလူများ၏ကျွန်းများတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုအမျိုးအစားအတွက်ဆက်ဆံမပါဘူးဆိုရင်ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများပေးဆောင်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Non-နေထိုင်သူများမှလုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းမရှိအခွန်ပေးဆောင်နှင့်မျှမတို့အခွန်ရှောင်အခွန်ရှိပါတယ်။
က Man ၏ကျွန်းဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ Protocol ကို3အညီအီးယူအကောက်ခွန်ပိုင်နက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ က Man LLC တစ်ခုကျွန်းက Man ၏ကျွန်းများတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦး VAT ကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်အီးယူအတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စဉ် 0% ၏က Man ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်း၏ကျွန်းအသုံးချဖို့အတွက် LLC အားသာချက်တစ်ခုပေးသည်။
ပညတ္တိကျမ်းနှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များမလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သော်အက်ဥပဒေစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများ LLC သည်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများသက်သေပြခြင်းနှင့်ရှင်းပြဖို့လုံလောက်သောဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်ပါဘူး။
မည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအမျှမှတ်တမ်းများဝင်ငွေ, ငွေပေးချေမှု, ချေးငွေများ, paid အခကြေးငွေနှင့်အမြတ်အစွန်းနှင့် ပတ်သက်. ထားရပေမည်။
နှစ်စဉ်ပြန်လာကုမ္ပဏီများ Registry ကို LLC သည်မြို့တော်နှင့်အဖွဲ့ဝင်အသေးစိတ်နှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်း၏နောက်ဆုံးနေ့အားဖြင့်နှစ်စဉ်ပြန်လာ file ရန်ပျက်ကွက်ကုမ္ပဏီများ Registry ကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြီးခံရ LLC သည်ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီများ Registry ကိုမှတ်တမ်းများအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာလျှောက်ထားသူပိုမိုမြင့်မားမှတ်ပုံတင်အဖိုးအခပေးဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းလျှင် LLC ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်ခွင့်ပြုချက် 48 နာရီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းယူစေခြင်းငှါခန့်မှန်းရသည်။
က Man လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ၏တစ်ဦးကျွန်းကဤအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသွား: 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, (နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်နိုင်သူ) နှစ်ဦးကိုအဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံးမရှိနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်လိုအပ်သောနှင့်အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။